समयमै सचेत हुनुहोस्, यसकारण बिग्रिन्छन् श्रीमतीहरु ! परदेशमा भएकाले त अवस्य पढ्नुहोस - Pariwartan Khabar Pariwartan Khabar
समयमै सचेत हुनुहोस्, यसकारण बिग्रिन्छन् श्रीमतीहरु ! परदेशमा भएकाले त अवस्य पढ्नुहोस
5 February, 2018 6:23 pm
काठमाडौं । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका श्रीमतिहरु नेपालमा बिग्रिएको धेरै समाचार प्रकासनमा आएका छन् । श्रीमानको कमाइमा श्रीमातीको मस्ती….., विदेशमा श्रीमानलाई सास्ती, नेपालमा श्रीमतिको अर्कैसंग मस्ती…. जस्ता हेडलाईनहरु दैनिक जसो समाचारपत्रमा आइरहेका छन् । सुनौलो सपना बोकेर विदेशीएका श्रीमानले पठाएको पैसा नेपालमा बसेर अर्कैलाई ख्वाउने, प्याउने र अन्त्यमा श्रीमानको सबै कमाई कुम्ल्याएर अर्कैसंग भागेका कुराहरु हामीले देख्दै र सुन्दै आएका छौं ।
यस्ता समाचार हरु प्रायः आफ्नै लापरबाही र धेरै बिश्वास दिनुले गर्दा हुने गरेको एक श्रीमति पीडितहरुको भनाइ र उनीहरुको अनुभवले देखाएको छ । आखिर के कारणले हो त ? बिदेशमा गएका पुरुष हरुको प्राय घर बिग्रिनु ? उनीहरुका श्रीमतिहरु गलतबाटो रोज्न ?
एउटा तितो एथार्थ हामीले विभिन्न पिडित व्यक्तिका अनुभवहरुलाई मार्फत संकलन गरी प्रस्तुत गरेका छौं । यसको मतलव यो होइन की विदेशमा गएका सबैका श्रीमति नेपालमा बिग्रिएका छन् ।
आमाबाबुको सबै कुरा सुन्नुपर्छ । बुहारी भित्र्याएपछि सासु बुहारीको झगडा परे पनि यो क्षणिक श्रीमान श्रीमतिको झगडा जस्तै हो । बुहारीसंग सासु नबोली पनि ती तपाईकी आमा हुन् ।
उनले तपाईको कहिल्यै कुभलो चिताउँदिनन् । त्यस्तैले श्रीमतीलाई भन्दाबढी आमा बाबुलाई बढी विश्वास गर्नुहोस् । श्रीमतीको विश्वासमा घरबार बिगार्नेहरुको नै आफ्नै घरबार धेरै बिग्रिएको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ ।
अर्को तपाईको फोनको श्रीमतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्र्दा कस्तो तरिकाले बोल्नु हुन्छ ? ठाडो पाराले या सामान्य तरिकाले ? या बोल्दा बोल्दै रिसाएर फोन काट्नु हुन्छ ? जब श्रमती हरु बोल्दा बोल्दै एकासी झर्किने ,रिसाउने गर्छन भने शंका गर्नैपर्छ ।
असल श्रमती हुन् भने तपाई जे जस्तो भन्नुस बिदेस को फोन ,आफ्नो श्रीमानको फोन आउदा खुसि नै हुनु पर्छ । यदी सामान्य कुरो मै फोन काट्ने , झर्किने गरिन भने सम्झनुस कुनै चक्कर चल्दै छ, जहाँ अब तपाई को फोन नआउदा पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्था भैसकेको छ ।
घरमा पैसाको कारोबार कसले गर्छ ? श्रीमती या बाबा आमाले ? या जति भए पनि श्रीमतीको नाम मा पठाउनु हुन्छ र कुनै हिसाब र जानकारी लिनु भएको छैन ? यी प्रश्नमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । श्रीमती हो अर्काको घरबाट मलाई नै भनेर आई, यसको अब म बाहेक अरु कोही छैन भनेर कहिल्य भावनामा नबग्नुहोस् ।
बरु तपाई एकपटक आफ्नो दुःखको कमाइलाई सोच्नुहोस् । मैले कमाएको पैसा यसै उडेको त छैन कतै ? त्यसैले श्रीमतिलाई अभावमा बाँच्न सिकाउनुहोस् । अभाव भन्दैमा सारो कष्ट भने दिनुहुँदै । धेरै माया गरेर सबै पैसा श्रीमतिलाई नै पठाउनुहुन्छ त्यसको हिसाब किताब केही राख्नुहुन्न माग्नुहुन्न भने सोच्नुहोस् तपाईको लगानी बालुवामा पानी अवश्य हुन्छ ।
अर्को चनाखो हुनुपर्ने प्रश्न हो श्रीमती कतिको चुलबुले छिन् ? कुनै जागिर गर्नु हुन्छ या जागिर गर्ने बहाना गर्दै छिन् ? श्रमती चुलबुले छिन् भने अलि ख्याल गर्नु होस् , किन कि महिला हरु जति चुलबुले हुन्छन ।
उतिनै यौन प्यासी पनि हुन्छन् , कुनै जागिर गर्नु भएको छ या छैन । कस्तो खाल्को जागिर हो , जानकारी लिनुहोस् , यहाँ यस्तो पनि देखिनमा आएको छ श्रीमती जागिरमा जाने भन्ने उल्टो आफ्नो पैसो खर्च हुने । यो अवस्था घरबार बिग्रिएको अवस्था हो ।
किन कि जब अनेक थरि बहाना गरि श्रीमती बाहिरिन खोज्दैछिन् भने अब तपाइँ आफै बुज्नु पर्ने कुरो हो, तपाई बिदेश हुँदा हुँदै यस्तो बहाना गर्छिन भने , त्यहाँ कुनै ठूलो योजना बनि सकेको हुनुपर्छ ।
सबै जागीरमा जाने श्रीमतिमा यो कुरा लागू नभए पनि यस्ता विषयमा चनाखो चाही अवश्य हुनुपर्छ । यसका लागि कहिले काँही जागीर गर्दैछन् भने अब जागिर नगर मेरै कमाईले पुगिहाल्छ नी । भनेर उनको मनको कुरा बुझ्ने प्रयास गर्नु उत्तम मानिन्छ ।
अर्को कुरा तपाई विदेशमा गइसकेपछि बेला बेलामा श्रीमतीको मोबाइमा फोन गर्दै गर्नुपर्छ । उनी मोबोइमा कत्तिको बिजी हुन्छिन् । कि तपाईलाई थाहै नहुने अर्को नम्बर पो चलाएको छ की यी सबैकुरा ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले को अवस्थामा सबै भन्दा बिकृति मोबाइल र सामाजिक संजाल मार्फत भएको छ ।
यहाँ केहि महत्वपूर्ण र बास्तबिक कुरा आफै बुज्नुहोस , श्रीमती को मोबाइल धेरै बिजी हुनु र विशेष गरि साँझ र रात को समय मा बिजी हुनु भनेको पनि खतरा नै हो । यस विषयमा घरमा भएका छोराछोरी वा अरु कुनै माध्यामबाट जानकार रहनुहोस् ।
कुनै समयमा बुढोको कमाइमा रजाइ गर्न पल्कीसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन तपाई संगै भएको बेलाका उनको मोबाइलमा मिस कल, रिसिभ कल, म्यासेज, डाइल नम्बर बारम्बार हेर्दै गर्नुपर्छ । यसले पारिवारिक कहल आउला भनेर कत्ति पनि नडाराउनुहोस् ।
किनकी श्रीमान श्रमतिको झगडा परालको आगो यस्सै भनिएको होइन । एक छिन झगडा भए पनि पुनः मिलन भइहाल्छ । यदि श्रीमति असल बाटोमा छिन भने अवस्य पनि झगडा पर्दैन ।
यो सबैमा महिलामा लागू नहुने भए पनि पछिल्लो केही यस्तो घटना घटेका छन् । जुन तपाई हामीले सामाचारमा सुन्दै र पढ्दै आएका छौं ।
त्यसैले आफू सचेत भइयो भने वैदेशिक रोजगारीमा मात्र होइन विश्वको कुनै पनि कुनामा गए पनि तपाईले आफ्नो घर परिवार सुमधुर बनाउन सक्नुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका मात्र होइनन् संगै बस्दा बस्दै घरबार बिग्रिएका घटनाहरु पनि हामीले देखेका छौ तर तुलनात्मक रुपमा यस्ता घटना भने कमी नै हुन्छन् ।